Travel By Train In muBudapest: 10 Things You Need To Know | Save A Train
musha > Travel Europe > Travel By Train In muBudapest: 10 Things You Need To Know
Travel By Train In muBudapest: 10 Things You Need To Know
Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Budapest zvirokwazvo ndiro nomusimboti Hungary. Chinhu chinokosha pfungwa panyaya vaienda nechitima muBudapest mune nezvitima zhinji rega. Nepo Travel nechitima muBudapest uye zvavo zvinonakidza uye kazhinji chiitiko chitsva kuvanhu vazhinji, kunogonawo zvishoma tsinga-wracking dzimwe nguva, kunyanya muguta idzva uye dzimwe. Isa pfungwa dzako pane zvakanaka uye tora Kutarira 10 zvinhu zvaunofanira kuziva pamusoro nechitima kufamba muBudapest.
Pane nzira nhatu dzinonyanya kutapuriranwa chitima dzemapurisa paunogona vaienda nechitima muBudapest pamwe uye vari:
mabvazuva: Zvinowanikwa kuMabvazuva. Ndiyo huru dzakawanda uye intercity kuchiteshi chechitima muBudapest.
mavirazuva: Zvinowanikwa kuMadokero.
Deli: Zvinowanikwa iri South
famba: Airport Transfers
The dzepedyo chiteshi kuna muBudapest Airport Terminal 2 ndiye Ferihegy, pamwe nezvitima uchishanda kuti uye kubva Nguyati Station muBudapest.
Kana uri parwendo guta chero Backpacks, zvikwama kana mumwe ruoko mukwende kuva nechokwadi kuti achengetere ichi pasi pakati makumbo ako paaifamba zvitima kune njodzi divi.
Safety nokuti Woman
Vakadzi vanogona kunzwa vakasununguka kana achifamba nechitima kumativi muBudapest. The peguta rakanyatsojeka njodzi kuti guta guru uye chero Vafambi vanoshandisa pfungwa zvakafanana uye regai kutora zvisingakoshi pangozi chete nokuti pazororo zvino vanogona kuva nechivimbo chokuti hapana chakaipa achauya kwavari.
Vashanyi vari ungangotarisa kuti pick-muhomwe mu ungana voruzhinji zvifambiso dzakadaro se chitima dzemapurisa, apo vamwe zviduku kuba zvingaitika. Nepo izvi haisi chikonzero mikuru hanya vashanyi vari zano kuziva uye gara wakangwarira.
Kudzokera Around – Kufamba Train muBudapest
Kune akawanda akasiyana njanji mitsetse muBudapest uye muchitima kufamba nezvimiro chikamu chikuru zvavo mabhazi zvinoreva unogona kuwana kuda kose nechitima. Iva nechokwadi kuti kuongorora nguva uye mitsetse dzakasiyana unofanira kutora kuitira kuti nokwawaienda. Unogona kuwana izvi ruzivo rwekufambisa online kana pachiteshi chezvitima. Unogona zvakare kutenga matikiti panguva nhepfenyuro.
Kamwe wanga muBudapest rimwe zuva kana maviri uye ndasvitsa mabheyaringi yenyu, kuva nechokwadi kuti munhu Budapest Card. The kadhi rine nhamba Extras akadai vakasununguka kupinda vamwe mamiziyamu, vakasununguka bhazi/chitima / chitima / mvura pakufamba, uye mvura rwendo.
Travel nechitima muBudapest Day Trips
Kune akawanda naka zuva nzendo kutora nokuita Travel nechitima muBudapest. Vachatora kuti vamwe incredible dzakasiyana uye kukuratidzai yevedza girl munzira. Iva nechokwadi kuti kutsvakurudza wako usati waenda. Iva nechokwadi unyatsobatsirwa kubva nguva yako muguta rino.
Budapest ane zvimwe mukuru uye vazhinji yakanaka chitima dzemapurisa muHungary. Iva nechokwadi kushanyira Eastern Railway Station (mabvazuva Railway Station) uye Western Railway Station (mavirazuva Railway Station) musvike kwavari Travel nechitima muBudapest, paunenge ikoko uye vagamuchire nhoroondo uye kuyevedza mapurani kuti Budapest anofanira kupa.
The History of Railway Lines
The M1 mutsetse muBudapest ndiyo yechipiri-dangwe pevhu njanji mutsetse munyika. It yave ichishanda kubva 1894 uye kunyange dziri somunhu UNESCO World Heritage Site. Pane kudaro nhoroondo zvikuru muguta rino uye zvitima ave achishandiswa kare uye vachiri mhanya zvakanaka.
Budapest zvechokwadi ane zvose uye ari mukurumbira mushanyi rwendo. Wadii kufanana veko uye shandisa zvitima sezvo rudzi mabhazi? Iwe haangaodzwi mwoyo!
Mugshot A Train Ticket nekuti European kufamba? Wadii kutora 3 maminitsi yedu yepaIndaneti kuwana yakachipa pashiri matikiti kuti nzira dzenyu. Login redu Save A Train Website ikozvino. Tickets inogona kubhadharwa nokuti vakawanda nzira, zvose kuti ruzivo wako nyore sezvinobvira.
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-things-know-travel-by-train-in-budapest%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba France, Chitima Kufamba Switzerland, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
5 Day Best Trips To Travel By Train From Paris
Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba UK, Travel Europe